Amandla Ibhalansi - Mytika Speak
Ikhaya / Amandla Ibhalansi
Ngiyeka kanjani ukuthola i-fuse emfushane?
Lapho umuntu ene-fuse emfushane, bangasuka ekuzoliseni baye ekuqhumeni ngokufutheka ngokushesha okukhulu. Inkinga yangempela kulesi simo ukuthi lokhu kushesha kanjani ...
Yini ukugxila futhi kwehluke kanjani ekuthatheni ngokweqile?
Kuyini ukungaqiniseki engikuzwayo?
Isigaba - Balance Energy
Ukulinganiswa kwamandla kuthinta kanjani imali?
Kungani kwenzeka uMandela?